JINGHPAW KASA: ကြံစီဖန်တီး၍ မြစ်ကြိးနားမြို့မှ အမျိုးသမီးများကို ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခိုင်းခြင်း
ကြံစီဖန်တီး၍ မြစ်ကြိးနားမြို့မှ အမျိုးသမီးများကို ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခိုင်းခြင်း
လာမည့် ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ခုတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကြောင်းပြ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခြင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဓိကဦးဆောင်သူအမျိုးသမီးများမှာ
၁၊ ဦးခမိုင်တန်- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဇနီးဒေါ်ဂျာခေါန်
၂၊ ဦးခက်ထိန်နန်- စီးလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီကချင်ပြည်နယ်ပါတီ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးညီကိုပါတီ၏ ဇနီးဒေါ်နန်ဆိုင်း
၃၊ ဒေါ်လဂျွန်ဆိုင်းတောင်-ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း -ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ညီမအရင်း
စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး (၅) ဦးမှ ဦးဆောင်၍ ဟန်ပြဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခြင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အခုလိုကြံ့ခိုင်ရေးအမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခြင်းအပေါ်မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ကချင်ပြည်သူများ၏ သဘောထားအမြင်က အစိုးရနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပူးပေါင်း၍ ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO/KIA) ကို တစ်ဖက်တတ် ချုံ့ချရန် ကြံစီဖန်တီးခြင်းသာဖြစ်သည်။ KIO/KIA ကသဘောထားတင်းမာ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားသဖြင့် တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျမတို့အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကို ရပ်နားရန် တောင်းဆိုမည့်အစား တစ်ဖက်တတ်KIO/KIA ကို ပစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။
ယခုဆန္ဒပြရန် ဦးဆောင်နေသူများမှာ ကချင်ပြည်သူများအတွက် အမှန်တရားဘက်ကို ရပ်တည်ပေးသူများမဟုတ်ပါ။ အခုတလော မြန်မာအစိုးရအတွက် အမေရိကန်အစိုးရ၏ စီးပွားပိတ်ဆို့ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ရန် လွှတ်တော်မှာ အရေးတကြီးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နေသော အချိန်ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပဠိပက္ခ မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းသည် စီးပွားရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအဟန့်အတားကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပူးပေါင်း၍ ကြံစီဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။
ထူးခြားချက်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အရေးကြီးသော သတင်းမီဒီယာ DVB ရုပ်သံအပါအ၀င် ခရီးသွားစာရိတ်၊ နေထိုင်အခင်းအကျင်း၊ အစားအသောက်အားလုံးကို ဦးဆောင်စီစဉ်သူများမှ တာဝန်ယူပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကြားရှိရသည်။
တခြားထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြိုပေါ်တွင် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဂျန်မိုင်ကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်အတွင်း မှီခိုနေသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များပူပေါင်း၍ အပစ်မဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းပြုလုပ်ထားသော ဦးဘရန်ရှောင်ကို လွတ်ပေးရေး၊ မျှသစွာတရာစီရင်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လိုလားသဖြင့် ကချင်ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်သော သတင်းကို ပြည်တွင်းထုတ်ဝေဂျာနယ်မျာတစ်ခုမှ ရေးသားဖေါ်ပြ ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ အံ့သြစရာပင်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍက ဘယ်ဘက်ကို ကူညီနေသလဲ။ စဉ်းစားစရာပင်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပြီ။
ting nang amyu hpe ntsaw ra jasam wa hpe she KA NU , KA WA sha du au WP myu sha ni hpe grai yawn dik ai ...WP myu shaniashing ma ka ang kaw ning wa hteachye ai ni gaw ndai ni nan rai sai..NDAI NUM5ndai ni gaw myen la niamazut nga chyawm abraw da ya ai hkrum na ma ra ai..naw la yu nga ga..
Sai Jet said...
Tinangasai hpe n'gaya ai ni rai na re. Shing n'rai Wunpawng sai n'jet ai ni rai na re.
Ya dai hkring mi sha nga pyaw na tam na sha,myenamasu sha ngun ai tinangamyu tinang nyet kau shangun nga ai,magam
jaw nga hpe ndum,Teng man lam hta ntsap myen asuya hpe madaw ninghkap ga.WP shada gangdun gangjen lu galaw yang,SAI myit kraw wenyi hta pyaw ngaakun?NGAI GAW GWI PI N GWI MIT AI.hkum galaw,shinggyim sha shada nyet lu tim,KK naanta masha yawng hpe DAGAM kau nyet kau hkrum yang htani htana she rai nga ai oi.WP NI A SAI KAW CHYING LAU NA MATU,hpaw mi5hpe MASU shangun na jai lang nga ai.KADAI MUNG HKUM LAWM.AHKAW AHKANG MAKAM MASHAM,LAMU GA MAHKRA HPE LU MAYU KA UP MAYU ZING MAYU MYU SHAMYIT MAYU AI A MAJAW,MYEN ASUYA GAW LAM AMYU MYU HKU MASU KABA MAW LANYET HKU GYAM NGA AI HPE,TAU NNA CHYE GA HPRANG GA, DUM GA,DANG KAU GA AMAJA NGA GA.
Chyum mung ga hku hkawm sa ga lo ( Hpaw mi , Nu num5) nie. Tinangamyu hpang ma ga de she tsap ga. N nyet kau ga .
An hte Jing Hpaw ni gaw Ru Sai yu ai re ma jaw , nan hte ( H.M 5)amajaw , nan hteaRu Sai hpe , (K.K)amanemung, jing hpaw myu niala pranemung myi man ka hpa tai wa chye ai .
Myu hte mung danama tu ga sat nga ai ni ( k.kahkang hte) , tsin yam hkrum nga ai ni , Wun Paung SAI , ma ga de she rau shang laum ga. Arawng n ra ga ( H.M5) .
အမျိုးသမီး (၅)ဦးတို့နှင့်တကွခင်ပွန်းသည်များနားထောင်ကြလော့ ယခုလိုပြုခြင်းသည်စစ်အစိုးရကိုအားကိုးခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိအမျိုးကိုငြင်းပယ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသက်သေထင်းရှားနေပါသည်။စစ်အစိုးရဧ။်ထိုးစစ်ကိုရပ်မှစစ်ငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်။ကေအိုင်အေကတိုက်စစ်ကိုမပြုဘူးဆိုတာသက်သေအများကြီးရှိတယ်
ဦးဘရန်ရှောင်အရေးဆနပြခြင်းကို ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်က ဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ အောင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာ မတက်လာတာက အရမ်းရှင်းပါတယ်။ သူတို့ ဒီအရေးကို စိတ်မ၀င်စားလို့ပေါ့။ ဘာမှအံ့သြနေရာစရာလိုမယ်လို့မထင်ပါ။ ယခုလည်း ကရိုနီဒေါ်ဂျာခေါ်န်တို့ အုပ်စု ဆနပြမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ပြကြပါစေပေါ့၊ ဘာအလုပ်မှမရှိတာ၊ အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက် ညောင်းလာလို့ လမ်းပေါ်ထွက် အညှောင်ဖြေတာပဲနေမှာပါ၊ ဂျိန်းဖော့ကစာရေ၊ ဘာမှဦးထွေထွေထူးထူး ဒီအတွက် ဦးနှောက်ခြောက်ခံ မနေပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ပြီးကြည့်ရုံပဲပေါ့.........
ဒီဘွားတောအဖွဲ့ ကတော့နေရာတကာလူတတ်ရောင်လုပ်ချင်တဲ့ ရေပေါဆီတန်းဝင်တွေပါ။သူတို့ခင်ပွန်းတွေကလဲ ဗမာအစိုးရဆီဖင်ခံပြီးလုပ်ကွက်လေးတွေတောတောရထားကြတယ်ဆိုပဲ..ပြီးတော့ဦးလဂျွေန်ငန်ဆိုင်း အမျိုးတွေကအခုတောတောထောနေကြပြီကွာ နေရာတကာသူတို့လေလံဆွဲထားတာတွေပဲ။ဗလမင်းထင် ဂိတ်ကြေးလေလံနဲ့ နန့်စီးအောင် စစ်ကိုင်းနယ်စပ်လေလံနဲ့ စောက်ရမ်းထောနေကြတယ်ဗျာ။ဒီအဖွဲ့တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ခရိုနီ တွေဆိုလဲမမှားပေါင်...။
Ndai ni gaw myen asuya shan la ni hpe mai dang masawp ya nna W.P sha ni hpe dut sha taw nga ai ni rai ma ai , sadi mu lu yaw .ANHTE A MUNGDAN ngwi simsa na gaw ya aten up hkang nga ai myen asuya hta she madung re, anhte yawng chye chyalu rai nga ai le ,SHANGLAWT ASUYA HPE HPA TSUN NRA AI .KIO KAW NNA anhte W.P SHA niamatu asuya kaw hpyi shawng tawn da ai ahkaw ahkang ni hpe myen asuya jaw jang MAJAN sim mat na re ,NDAI HPAWMI ni aten shama jahtau ,hkawm wau hkawm nra na ra ,TINANGaLABAU ntsawm na hpe mahtang DUM mu yaw.
Yawng hpe HTAU SAK KAU ra ai...
Shanhte ni ndai zawn galaw alam gaw shingdu de na shadut ai masha nga ai majaw rai na re.
Ndai num ni kaw na li loi zet ai gaw HkaMai jan sha re. Shi chyawn gaw shan sha ga sai sharaw zawn rai nna MYEN ni shangu ai hku hkan galaw jan gara hku ting kyeng akyu lu la mai ai ngu ai hpe chye ai jan re.
Shawng hkan kaw nna MYEN asuya hte pawng nna, ja htu ai lamu ga lawk ni, hpun galaw sha na hpun lawk ni shawk sha ga ai jan nan re.
Ya mung hpa baw ahkaw ahkang bai hpyi galaw sha na kun? WP myu sha ni yawng jawm yu yu ga.
Lajawn Seng Tawng mung Zahkung Ting Yingakasha Ying Nam hte grai hkau ai jan rai nna, madu wa nnga mat ai hpang MYEN hpyen du law law hte mayun sumtsaw tawn,la kaji la kaba tawn ai wa re.
Dai daram nga jang gaw, ndai kaw lawm ai ni hpa majaw ndai lam galaw ai re ngu ai hpe yawng maram lu sana re.
Kaja wa teng man ai simsa lam, jet ai simsa lam hpe lu mayu ai majaw galaw ai rai jang gaw hpa mi rai rai kaja dik sai.
Rai timung, teng ai/jet ai simsa lam ngu ai hpa rai ta? ngu ai hpe shanhte nchye tsun na ma ai. Nchye na ma ai.
Jinghpaw sai said...
Hkyet hting nan gaw Naypyidaw kaw, hpar gaung galaw, Hkyet hting nan jan gaw, myitkyina kaw myenahpa zel kanu galaw, lajung ngang seng kanau mung, myen sawa du wa kaw pha zel zel sha pyaw nga sai. Sak kau ra sai!!
Jan Mai Kawng masha langai mi said...
Sai Jet e, ndai yawng gaw J.W sai gaw grai jet ai ni rai na ai. Rai tim J.W myit n rawng ai ni rai ma ai. Shatapru masha niendai daram amyu myit nrawng ai Myenamayam ni hpe gaw Shatapru kaw na gawt shale kau mu law! Ndai ni amyu ni Kahpu Kanau ni hpe mung sadi mu law... Shara shagu shara la nna mying la chye ai amyu, tinggyeng akyu sha yu ai ni rai ma ai law... Hkyet, Lajawn, Hkamai hte Tsumhpawng ni yawng maren sha re. Myenagwi daw ni rai ma ai...
Hkun Myat hte shiaamyu ni, Saboi Jum yan nau ni, Zahkung Ting Ying ni, Ah-Dang ni yawng maren sha re sadi mu!
Hkawp Hkungga ai Tsawra ai Myitsu, Du Salang Kanu Kawa Mung chying sha ni yawng hpe chye shangun mayu ai lam..........
Ngai Lajawn Seng Tawng gaw nanhteakashu kasha majing re.
N'dai shiga hta lawm ai...
Slg. Hkamai Tang jan Ja Hkawn ni woi awn let simsa lam "Lam Hkawm" na hte seng n'na Ngai kaja wa tsep kawp n'chye lawm ai,Shang mung n'shang lawm ai. Ngai gaw Yanggon kaw Ma ni hpaji sharin ai hpe sin nga taw ai grai na sai re.
Ngai n'chye ai sha nye mying hpe jai lang da ai lam she re.
Htawm Hpang n'dai zawn n'teng n'man ai shiga hpe galoi mung n'ka na matu sadi jaw mayu ai.
Chye mayu ai lam nga yang ngai hpe san marit. Ngai na Phone- 0943164534 re. Galoi mung hkap tau la n'ngai.
Ngai gaw nanhteaSai Daw Sai Chyen re majaw galoi mung nanhte hte rau sha re.\_
Galoi mung Kam rit.
Hkungga Tsawra let,
Lajawn Seng Tawng.
ဦးဘရန်ရှောင်အရေးကို ပြည်တွင်းမီဒီယာပေါမရောက်တာမဟုတ်ဘာဘူး မီဒီယာတွေက ဂရုမစိုက်တာပါ အဲဒီအချိန်က ရခိုင်အရေးလောက်ဘာမှအရေးကြီးဘူးထင်နေတာနေမှပေါ့၊ မဂျိုးငှက်ဖြူရေ ခင်ဗျာကြည့်ရတာ ကချင်ဟုတ်ဘာတယ်နော် သူတို့ဘာသာအရက်သောက်၊ ဖဲရိုက်ပြီး ညောင်းလာလို့ လမ်းပေါ်ထွက်အညောင်းဖြေတာဟာ အားအားယားယား ငြိမ်းချမ်းရေးတွက် ဆန်ဒဖော်ဆောင်ပေးတယ်နော် အခန့်မသင့်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်မှန်းမသိတဲ့ဟာကို သူတို့လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာမမေ့ဘာနဲ့ ပြီးတော့ဘာဘဲပြောပြောလောလောဆည် သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့အားကိုး ရမဲ့ အရာ တစ်ခုဘာဘဲ ကျေးဇူးမတင်ရင်တောင်မှမျှော်လင့်ရမှာဘာဘဲ ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာ ဆိုတာ ဥပမာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့အရာ လုံးဝ ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘာဘူး ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ကို အားနာတယ် အြားနာတယ်ဆိုတာက ကချင်ပြည်နယ်ကို သူစပြီး သူ့ရင်ခွင်နဲ့ အုပ်စိုးမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှ ဒီလို စစ်မက်ဖြစ်ပွားရတယ် သူ့မှာ ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲရမလဲ ပြီးတော့ရိုးရိုးသာမန်နေရာလဲမဟုတ် သူ့ရဲ့ အချင်းကို မြှုပ်နှံထားပြီး သူတသက်လုံးကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာ တစ်နည်းအားဖြင့် သူရဲ့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဘိုးဘွားမိဘသေဆုံးပြီး မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့နေရာ ဘာ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အရင်စစ်အစိုးရလို ဖုန်ခါပြီးသွားမဲ့လူမဟုတ်တာသေချာဘာတယ်။ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပြောပြော ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ကချင်ပြည်နယ်မှာဘဲမွေးပြီး ကျွန်တော်တို့နည်းတူ ဧရာဝတီမြစ်ရေသောက်ပြီး ဒီလေကိုဘဲရှူလာပြီး ကြီးလာတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အရမ်းချစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကြီးကို စုတ်ပြတ်သွားလောက်တဲ့ထိတော့ သူကြည့်မနေလောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် ကျွန်တော်တို့တချက်လောက်ယုံကြည်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်လား၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အရမ်းချစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကြီးက ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကချင်သွေးစစ်စစ် ကချင်လူမျိုးဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ သူလုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိလဲ သူကြိုးစားမယ်လို့မျှော်လင့်မိဘာတယ်။